Soo dejisan Avira Antivirus Security 4.8.2 – Android – Vessoft
AndroidAmnigaAntivirusesAvira Antivirus Security
Bogga rasmiga ah: Avira Antivirus Security
Avira Antivirus Security – waa softiweer u fidiya howlgalka aaminka ah ee qalabka nidaamka. Avira Antivirus Security waxay ogaataa oo joojisaa barnaamijka waxyeellada leh iyadoo la adeegsanayo iskaanka tooska ah ee barnaamijyada inta lagu gudajiro rakibkooda ama loo cusbooneysiinayo noocyada cusub. Softiweerku wuxuu bixiyaa ka ilaalinta emaylka iyo macluumaadka shaqsiga ee mashiinka aaladda ka dhanka ah jabsiga ama xatooyada. Aaladda Amniga ee loo yaqaan ’Avira Antivirus Security’ waxay awood u siineysaa inay qeexdo meesha uu ku yaal aaladda lumay waxayna awood u leedahay inay si fog ugu qufuldo ama tirtirto xogta haddii loo baahdo. Amniga Hawada ’Avira Antivirus Security’ waxay kaloo dammaanad ka qaadaysaa kahortaga wicitaanada aan loo baahnayn iyo SMS khatarta ah.
Kahortagga khataraha kala duwan
Waa la ogaadaa oo meesha ka saaraa falsafadda
Ka ilaalinta xatooyada
Meel fog oo ah qalabka lumay
Joojinta wicitaanada soo gala iyo SMS-ka
Soo dejisan Avira Antivirus Security
Faallo ku saabsan Avira Antivirus Security
Avira Antivirus Security Xirfadaha la xiriira
Tool si aad u eegto oo baahin qulqulaya video. Software ayaa awood u oggolaanayaa in ay boostada iyo comments ama abuuro doorashada.
Editor ayaa image graphic oo taageero ka helaya saamaynta badan iyo sida diirada. Software waxay leedahay waxyaalaha aasaaska ah ee bulshada iyo dukaan dhisay-in qalabka ay u saxaa.